Mayur Times || मयूर टाइम्स || Authentic news from Nepal, Business Politics Society Art and many more ... » शंकर लामिछानेले सम्पादकलाई लेखेकाे एक पत्र
शंकर लामिछानेले सम्पादकलाई लेखेकाे एक पत्र
२०७७ भदौ ५ गते शुक्रबार ०५:३१
तपाईँले भन्नुभएको छ समाजको विशेषांकको निमित्त म केही लेख दिउँ- खास गरी पत्रकारिता र त्यो पनि समाज - कै समालोचना गरेर। करीब दुई घण्टादेखि समाजको मसँग भएको संग्रह पलटाइरहें र सोचिरहें क्यै त लेख्नै पर्‍यो। तपाईँ एक मित्रको रूपमा मबाट...
तपाईँले भन्नुभएको छ समाजको विशेषांकको निमित्त म केही लेख दिउँ- खास गरी पत्रकारिता र त्यो पनि समाज – कै समालोचना गरेर। करीब दुई घण्टादेखि समाजको मसँग भएको संग्रह पलटाइरहें र सोचिरहें क्यै त लेख्नै पर्‍यो। तपाईँ एक मित्रको रूपमा मबाट चाहनुहुन्छ आफ्नु कला कौशलको समीक्षा।
त, यो दुई घण्टा म सोचिरहें। र केही पनि सोच्न सकिनँ। कम से कम छाप्ने लायक त केही पनि सोच्न सकिनँ। तपाईँ भन्नुहोला छाप्ने लायक छुट्टाउने, अधिकार त सम्पादकमाथि पो छ। मेरो, यहाँनिर, छाप्ने लायक भन्ने शब्द प्रयोगको अर्थचाहिं हो, त्यस्तो विषय जो मानिसले पढ्न मन पराउँछ। अब तपाईँकै पत्रिका लिउँ न। मृत्यु, दुर्घटना, असाधारण कष्ट, पीडा इत्यादि नै त हुन् जसले त्यसमा प्रमुखता पाएका छन्। किन अर्काको कष्ट, दुर्घटना र मृ’त्युलाई मानिस पढ्न मन पराउँछ? (मन नपर्ने भए तपाईँको पत्रिका कहिले नै बन्द भै सक्थ्यो) म आजकल अनौठा पुस्तकहरू पढिरहेछु। स्टीफन ज्वाइनको द वर्ल्ड अफ यस्टर डे, अल्वेयर कामूको मीथ अफ सीसीफस, र चित्तरञ्जन नेपालीको भीमसेन थापा र तत्कालीन नेपाल। यसैबाट तपाईं बुझनु हुनेछ म अलि अध्ययन गर्न खोजिरहेछु मानिसको मृ’त्युपट्टिको भावना।
मृ’त्युको अध्ययन गर्नानिमित्त आरम्भ गर्ने बिन्दु हो जीवन। कारण मृ’त्युको जन्म जीवनको जन्म साथै भएको हुन्छ। त्यो क्षण जब म जन्में, त्यही क्षण नै मेरो मृत्युको प्रथम क्षण, प्रथम पाइलो थियो, होइन त? त आज जीवनकै कुरा गरौं र मृ’त्युलाई चिन्हें प्रयास गरौं।
म अहिले पसलमा बसिरहेछु। पानी परिरहेछ झमझम। भर्खरै राजदूतहरू र मन्त्रीहरूको मोटरको ताँती फर्क्यो – नरप्रताप थापाको शोकसभा थियो रे रञ्जनामा।
र, मलाई एउटा लेख लेख्नु छ। यस्तो लेख जसले नेपाली साहित्यको उत्थान गरोस्, यस्तो लेख जसले मणि दाजुको समाजको स्तर नगिरावोस्, यस्तो लेख जुन पढ्दा नेपाली जनता रमाओस्। तर मणि दाजु, म अल्मलिरहेछु, मेरो मन स्थिर छैन, सबै कुरा जो आँखाअगाडि घटिरहेछन् तिनलाई म हेरिरहेछु, र बुझ्न नसक्नेछु।
ढ्याक्क। ढ्याक्क। ढ्याक्क। ढ्याक्क।
मणि दाजु, के कहिले यस्तो हुन सक्दैन, तपाईं अखबारमा जन्मको मात्र खबर छाप्नुहोस्? के यस्तो हुन सक्दैन। तपाई भीमसेन थापाको आत्महत्याको कारण छाप्न सक्नुहोस्? के यस्तो हुँदैन, कहिले त साँढे र वर्षाको सम्पादकीय त्यागेर तपाईँ आफ्नो सच्चा कथन भन्न सक्नुहोस्? के यस्तो हुन सक्दैन, कहिले आफैलाई चिरेर आफ्नु महत्व छाप्नुहोस्
तपाईँ आज सोच्नुहुँदो हो- पत्रिका चलाएर तपाईँ देश र जनताको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ भन्ठान्नु हुँदो हो, नेपाली इतिहासमा तपाईँको स्थान छ, सदा रहिरहनेछ, तपाईँको देन पत्रकारिता जगतले कहिले पनि भूल्न सक्नैछैन होला। मूर्ख दाजु बेकार हो तपाईँको नाम अखबारले त्यहाँ छापेको छ सँधैं जहाँ समाचारलाई एक कालो धर्काले तपाईँबाट सीमा रेखा छुट्ट्याएको हुन्छ। थाहा छ तपाईँलाई, तपाईँको अखबारले रोजै कति कसिंगर र गुहु झयालबाट चोकमा मिल्काउँछ? थाहा छ तपाईँलाई ৷ थाहा छ तपाईँलाईं? थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँलाई केही थाहा छैन। तपाईँलाई किन साँढेमाथि सम्पादकीय लेखें भन्ने पनि थाहा छैन। तपाईँलाई किन भीमसेन थापामाथि सम्पादकीय लेखिन भन्ने पनि थाहा छैन ।
तपाईँलाई किन सम्पादकीय लेख्छु भन्ने थाहा छैन, तपाईँलाई किन सम्पादकीय लेख्दिन भन्ने पनि थाहा छैन। अझ, मणि दाजु, तपाईं किन सम्पादक हुनुभयो: त्यो पनि थाहा छैन तपाईँलाई ।
तपाईँ सम्पादक नभए के हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि थाहा छैन तपाईँलाई। तपाईँको पत्रिका त उ त्यो माग्नेको लँगौटी हो, जसका कापमा रोज ट्रेडलका औँलाले जुम्रा मारिरहेछन्।
मणि दाजु, बेकार छ। हामी सदा नै आफूलाई छोप्न खोज्छौं। हामी अर्काको मृत्युको समाचारबाट आफ्नु मृत्युको समाचार छोप्न खोज्छौं। हामी अर्काको विश्वास पढेर आफ्नो विश्वास छोप्न खोज्छौं। हामी आफ्नो मनको सत्य कुरा श्रद्धाले छोप्न खोज्छौं। म जो ईश्वरको कल्पना गर्छु, त्यसको पूजा गर्छु, म आफ्नु औंलामा लागेको बोकाको रगतको रङ्गलाई अबीरले छोप्न खोज्छु। तपाईँ जो साँढेमाथि सम्पादकीय लेख्नुहुन्छ, आफू गाई भएको छोप्न खोज्नुहुन्छ। मणिराज उपाध्यायलाई सम्पादक मणिराज उपाध्यायले छोपिरहेछ। शंकर लामिछानेलाई पतिपिता व्यापारी शंकर लामिछानेले छोपिरहेछ। तपाईँ आत्महत्या गर्दै हुनुहुन्छ, म आत्महत्या गर्दैछु। तपाईँ र म नमरिकन के खबर लायकका हुँदैनौं? हाम्रो आत्महत्याको प्रोसेस के यत्ति महत्वहीन छ, हामी स्वयं त्यस बारे सोच्न लेख्न पनि चाहन्नौं? यो सोचाइलाई छोप्नु नै हाम्रो जीवन हो त ?
मणि दाजु, यस मनोस्थितिमा म कसरी लेख लेख्न सक्छु? कसरी म साहित्यका सृजन गर्न सक्छु, कसरी म नेपाल आमाको सेवा गर्न सक्छु? कसरी म राष्ट्रियताको नारा लगाउन सक्दछु?- जब मेरो नारा, मेरो भविष्य, मेरो भाग्य, मेरो विश्वास, मेरो खोसुवा पुर्जी, मेरो प्रमोशन, मेरो निमंत्रण, मेरो मृत्यु खामबन्दी छ? जब एउटा पिउनले त्यसलाई ओसारिरहेछ, एउटा यस्तो पिउन जसलाई खामबन्दी चिठ्ठीको मजबुन थाहा छैन। भो, मणि दाजू, विशेषांक निकाल्ने आवश्यकता नै के छ र? तपाईँले विशेषांक निकाल्ने अठोट नै गर्नुभएको छ भने, म के भन्न सक्छु र यत्ति हो – यस पटक म लेख दिन असमर्थ छु। शायद अर्को पटक तपाईँको पत्रिकाको हेडलाइनमा आउनबाट उम्किएँ भने – शायद अर्को वर्ष। कृपया पत्र पढेर तुरुन्तै च्यातिदिनुहोला।
प्रकाशित मिति ५ भाद्र २०७७, शुक्रबार ०५:३१